ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: Kaspersky Software Update Next 30 days Software Free Download
Kaspersky Software Update Next 30 days Software Free Download
ကပ်စပါးစကီး ခရက်တွေကို လိုက်စမ်းသပ်တာ တခုမှ အဆင်မပြေဘူးဗျာ။ ဒါနဲ့ trail version ကိုပဲ နောက်ထပ် ရက် (၃၀) စီ ထပ်ထပ်တိုးသွားလို့ရမယ့် trail resetter ကို ပြန်သုံးနေပါတယ်။ ရက် (၃၀) တကြိမ် ပြန်ပြန်ပြီး reset လုပ်ပေးသွားရပါမယ်။
trail reset သုံးမယ်ဆိုရင်
1. KIS Self-Defense ကို ပိတ်ပါ။
2. KIS exit လုပ်ပါ။
3. အခု ဒေါင်းလုတ်ရလာတဲ့ .reg ဖိုင်ကို ဖွင့်ပါ။
အခု KIS ကို ပြန်ဖွင့်ပါ။ နောက်ထပ် ရက် (၃၀) ထပ်ရလာပါမယ်။ (အင်တာနက် ချိတ်ထားရမယ်နော်။ KIS trail version activate လုပ်ဖို့က အင်တာနက် ချိတ်ထားမှ ရပါတယ်။)
၀င်းဒိုးစ် 32 bit သုံးသူတွေအတွက် ဒီဖိုင်ကို ဒေါင်းပါ။ Download Click Here
64 bit အတွက်ကတော့ ဒီဖိုင်ပါ။ Download Click Here
တချို့က 32 bit / 64 bit ဆိုတာဘာလဲတဲ့။ ဘယ်မှာ ကြည့်ရမလဲတဲ့ မေးသူတွေ ရှိတဲ့အတွက် -
My Computer > Right Click > Properties ဖွင့်ပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့နေရာမှာ ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘာ ဗားရှင်းလဲ ဆိုတာ တွေ့ရပါမယ်။
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 5:00 AM